Nwere ike nweta ikikere ọkwọ ụgbọ mmiri gị ozugbo n'ụlọ akwụkwọ ọ bụla ịkwọ ụgbọala | Akụrụngwa n'efu
Nwere ike nweta ikikere ọkwọ ụgbọ mmiri gị ozugbo n'ụlọ akwụkwọ ọ bụla ịkwọ ụgbọala
Otu n'ime arịrịọ dị ukwuu nke ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na-arịọ bụ na ọ ga-emesịa kpebie ụdị anụ ahụ nwere ike igosipụta ahụmịhe gị na ihe ọmụma banyere ụkpụrụ dị iche iche dị na iji drones. O doro anya na enweela ụfọdụ ndụmọdụ iji bụrụ nke ha ụlọ akwụkwọ ịnya ụgbọ ala ndị nwere ike inye ịzụ ndị na-anya ụgbọ mmiri n'ọdịnihu na-emezu nke a, mgbe ha mechara usoro a, ndị ọrụ nwere ike nweta asambodo ha nke na-azụ ha dịka onye ọkwọ ụgbọ mmiri site na Steeti Agency for Aviation Safety (AESA).
N'oge a, ọ bara uru ịkọwapụta nnukwu ọrụ nke Ngalaba nke National Driving School Confederation na-arụ ka nke a wee nwee ike bụrụ ikpe na mmechi na Salamanca Driving School Association. Dị ka a ghọtara louis rodero, onye isi oche nke Salamanca Driving School Association ugbu a, imirikiti ebe Salamanca na-eche echiche ịmalite nkuzi nkuzi maka ndị ọrụ ụgbọ mmiri, nke onye ọ bụla nwere mmasị nwere ike ịghọ onye ọkwọ ụgbọ mmiri mara mma.
The Salamanca Driving School Association na-echesi ike na ị nwere ike ịnye usoro ọmụmụ gọọmentị iji bụrụ onye ọkwọ ụgbọ mmiri ọkachamara
N'ịga ntakịrị nkọwa zuru ezu, gwa gị na taa atụmatụ a metụtara ọzụzụ nke ndị ọkwọ ụgbọ mmiri nwere ikike ijikwa ngwaọrụ nke oke ibu ya n'oge niile ga-erughị Kilogram 25. Anyị na-ekwu maka usoro ga-adịru n’agbata otu ọnwa na ọnwa abụọ, n’oge a ga-etinye oge ihe ọmụmụ ahụ.
N'ụzọ dị mwute, anyị na-ekwu maka naanị otu atụmatụ, ọ bụ ezie na m ga-ekweta na ihe dị mfe dịka ọ dịlarị ogo iji mara na usoro a nwere ike ịnwe ọnụahịa dị egwu. ga-adị gburugburu 800 ruo 900 euro. Enweela atụmatụ na onye ọ bụla na-anya ụgbọelu ga-agagharị n'ozuzu yana ndị ọzọ akọwapụtara nke ọma maka ojiji a ga-enye drone n'ọhịa dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » Nwere ike nweta ikikere ọkwọ ụgbọ mmiri gị ozugbo n'ụlọ akwụkwọ ọ bụla ịkwọ ụgbọala
You maara ma ọ bụrụ na enwere ike ịmegharị drone na mpempe akwụkwọ 3D? M na-eji ọdum 2 na m chọrọ iji mepụta a nnọọ oké ọchịchọ oru ngo na nke a